ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါ အကျော်ကြားဆုံးမှတ်တိုင် ဂျာမနီမှာ, အံ့ဖွယ် Cologne ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုအခမဲ့လည်ပတ်နိုင်သည်. ၎င်း၏ Gothic ဗိသုကာ, ပန်းချီဖန်ပြတင်းပေါက်, နှင့်မြစ်၏အမြင်မော်ကွန်းဖြစ်ကြသည်. သငျသညျအနုပညာကိုချစ်လျှင်, ထို့နောက် Cologne ရှိပါတယ် ပြတိုက်ကြီးတွေ သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းအနုပညာ Ehrenfeld ၌တည်၏. ဤဒေသသည် Cologne ၏တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်ခေတ်မှီသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, သွားနှင့်ကော်ဖီနှင့်စပျစ်သီးအဘို့နေရာ.
ထိုမြို့သည်အံ့ cast စရာကောင်းသောရဲတိုက်များနှင့်ဥယျာဉ်များသို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်, နှင့်သင်မော်ကွန်းအမြင်များတက်သည်ချင်လျှင်, ထို့နောက်မျှော်စင်မှဝင်ပေါက်အခကြေးငွေထက်နည်းသည်5ယူရို. မြို့တော်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီး အခြားခရီးသွားများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း သို့မဟုတ် ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ Cesky Krumlov ပုဂ္ဂလိကမြို့လမ်းလျှောက်ခရီး ဂိုဏ်းအဘို့. ဤနည်းဖြင့်သင်သည်မြို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်, ဒဏ္.ာရီ, နှင့်နတ်သမီးပုံပြင်ပြည်သို့အံ့သြဖွယ်ခရီးစဉ်ရှိသည်ဖို့အကြံပေးချက်များ.
Eger သည်ဘူဒါပတ်စ်မှအနားယူသောစနေတနင်္ဂနွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ရွေးချယ်မှု တစ်ရက်ခရီးစဉ်အကြား ဒါမှမဟုတ်ဘူဒါပက်စ်ကနေမြို့ကြီးပြိုကျတာကမင်းအတွက်ပဲ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီ enchanting မြို့မှာအနည်းဆုံးရှည်လျားတနင်္ဂနွေဖြုန်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပတွင်ခရီးသွားလာရန်အတွက်အများဆုံးရနိုင်သောနေရာ (၇) ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်တွင်တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-affordable-places-europe%2F%3Flang%3Dmy ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)